‘कन्ट्रि ब्लूज’ मार्फत विश्वभरी यसरी फैलिँदैछन् एक नेपाली संगीतकर्मी - Enepalese.com
‘कन्ट्रि ब्लूज’ मार्फत विश्वभरी यसरी फैलिँदैछन् एक नेपाली संगीतकर्मी
इनेप्लिज २०७७ कार्तिक ५ गते १०:५९ मा प्रकाशित
काठमाडौं– नेपालका एक जना युवा संगीतकर्मीले पाश्चात्य संगीतको लोकप्रिय विधा ‘कन्ट्रि ब्लूज’ मार्फत आफूलाई मात्र होइन नेपाललाई समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाइरहेका छन् ।
उनी हुन् लामाटार, ललितपुरका प्रकाश पोखरेल, जसलाई सांगीतिक क्षेत्रमा ‘प्रकाश स्लिम‘ को नामबाट चिनिन्छ ।
अमेरिका, क्यानाडा, अष्टेलिया, ब्राजिल, यूक्रेन, पेरु, चिली आदि देशका रेडियोहरुमा ती नेपाली संगीतकर्मीका सिर्जनाहरु प्रसारण भैरहेको सुन्दा हरेक नेपालीको छाति गर्वले फूल्ने पक्का छ ।
उनका गीत–संगीत विदेशी रेडियोमा मात्र होइन, अहिलेको कोरोना कालमा ती देशहरुमा आयोजना हुने भर्चुअल कन्सर्टमा उनी स्वयं नै प्रत्यक्ष रुपमा प्रस्तुत भएर आफ्ना गीत–संगीत प्रस्तुत गर्दै लाखौं स्रोताहरुलाई मनोरञ्जन समेत गराइरहेका छन् ।
यति मात्र होइन, यी नेपाली संगीतकर्मीका बारेमा अमेरिकादेखि अष्टेलिया, यूक्रेनदेखि चिलीसम्मका ब्लूज सगींतक प्रमुख अखबारहरु, रेडियो तथा अन्य प्रतिष्ठीत संचार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता तथा जीवनी नै प्रकाशित भईरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा म्युजिक सेलिब्रेटीका साथै ब्लूज सगित स्पेशलिष्टको छवि बनाइ सके पनि नेपालमा भने कम चिनिएका यी युवा श्रष्टा हुन् प्रकाश पोखरेल । अन्तर्राष्ट्रिय सांगीतिक क्षेत्रमा उनलाई ‘प्रकाश स्लिम’ को नामले चिनिन्छ ।
अनि, उनले नेपालमा निकै कम सुनिने तर पाश्चात्य देशहरुमा अत्यन्त लोकप्रिय मानिने संगीतको एउटा विधा ‘ब्लूज’ मा विशेषज्ञता नै हासिल गरिसकेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति नै आर्जन गरिसकेका छन् ।
हालसम्म नेपाली सञ्चार माध्यममा स्थान बनाउन नसकेका यी अन्तर्राष्ट्रिय स्रष्टा कलाकर्मी डटकमको सम्पर्कमा आएका छन् ।
यसक्रममा कलाकर्मी डटकमका सम्पादक कृष्ण भट्टराईसंग संगीतकर्मी पोखरेलले आफ्नो विगत, संषर्घ अनि सफलताका बारेमा खुलेर कुराकानी गरेका छन् ।
प्रकाश स्लिमको जन्म काठमाडौं उपत्यका भित्रकै एउटा सुन्दर गाउँमा भएको हो ।
लामाटार, महालक्ष्मी नगरपालिका–९ का स्थायी वासिन्दा हुन् उनी ।
२०३७ सालमा जन्मिएका प्रकाशले दुई वर्षकै उमेरमा बुवालाई गुमाए ।
उनकी आमाले प्रकाशसहित उनका एक दिदी र एक दाजुलाई बडो दुःखले हुर्काइन् ।
आम्दानिको एकदमै सिमित स्रोत र साधनबीच प्रकाशकी आमाले मेलापात गरेर उनीहरुलाई
उनकी दिदी तथा काकाको पनि यसमा योगदान रह्यो ।
उनीहरुको आर्थिक अवस्था कतिसम्म कमजोर थियो भने एक जोर नयाँ लुगा लगाउन
समेत दसैं नै कुर्नु पर्दथ्यो ।
हुर्किँदै जाँदा प्रकाशले गाऊकै स्कूलमा अध्ययन प्रारम्भ गरे, जहाँ त्यो बेला सुकुलमै बसाएर पढाइन्थ्यो ।
उनी बाल्यकालदेखि नै संगीत भनेपछि हुरुक्क हुन्थे ।
कतिसम्म भने मट्टितेल राख्ने ग्यालिनलाई काटेर ड्रम जस्तै बजाउँदै गीत गाउँथे ।
साइकल बेचेर गिटार
एसएलसी उत्तिर्ण भएको खुशीयालीमा प्रकाशलाई उनकी दिदीले एउटा साइकल उपहारको रुपमा दिइन् ।
तर, प्रकाशलाई चाहिएको थियो गिटार, किनभने उनी गिटारको व्यवस्था भएपछि औपचारिक प्रशिक्षण नै लिएर गिटारवादक बन्न चाहन्थे ।
त्यसैले उनले घरमा कसैलाई जानकारी नै नदिइ सुटुक्कै साइकल बेचिदिए अनि त्यही पैसाले एउटा गिटार किने ।
नयाँ साइकल साथीले केही दिनलाई चलाउन लिएर गएको छ भनेर परिवारका सदस्यलाई ढाँटिदिए ।
हातमा आफ्नै गिटार परेपछि उनले संसार नै बिर्सिए ।
दिनरात गिटारकै वरिपरि रमाउन थाले ।
केही महिना स्थानिय गिटार प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठसंग गिटार बजाउन सिके, तर उनको गिटार बजाउने तिर्खा मेटिएन ।
करीव दुई वर्ष जति त उनले गिटार गुरु खोज्दैमा बिताए ।
अन्ततः नेपाली संगीतका लिजेन्डरी व्यक्तित्व सिबी क्षेत्रीसंग करिव एक वर्ष
संगीतको सैद्धान्तिक शिक्षा लिए ।
एक वर्ष सिकेपछि गुरुकै ब्याण्ड साउण्ड अफ म्युजिकमा आवद्ध भई संगीत यात्रा प्रारम्भ गरे ।
लत्तगै, रेष्टुराँका साथै कन्सर्टमा पनि सहभागि हुँदै गए ।
औपचारिक सांगीतिक यात्रा
प्रकाशको औपचारिक संगीत यात्रा सन् २००३ मा प्रारम्भ भयो ।
त्यो बेलादेखि सन् २०१० सम्म उनले साउण्ड अफ म्युजिक ब्याण्डमा आवश्यकता अनुसार रिदम, लिड, बेस र भोकलिष्टको रुपमा काम गरे ।
त्यस्तै २००८ देखि २०१० सम्म ब्ल्याक हक नेपाल ब्याण्डमा रिदम गिटारिष्ट र २०१२ देखि २०१५ सम्म द प्लस ब्याण्डमा लिड र वेस्टर्न भोकलिष्टको रुपमा काम गरे ।
अनि बने संगीत प्रशिक्षक
विभिन्न ब्याण्डहरुमा आवद्ध भए लगत्तै उनी संगीत प्रशिक्षकको रुपमा समेत सक्रिय हुन थाले ।
उनी सन् २००४ देखि हालसम्म कलानीधि इन्दिरा संगीत महाविद्यालयमा गिटार प्रशिक्षकको रुपमा कार्यरत छन् ।
यो अवधिमा नेपालका नाम चलेका गायक, संगीतकार तथा चलचित्रका अभिनेताहरुलाई समेत गिटार प्रशिक्षण दिने मौका पाए ।
अभिनेता निखिल उप्रेतीलाई उनले गिटार प्रशिक्षण दिएका छन् ।
यसका साथै उनले विदेशी नागरिकहरुलाई पनि गिटार सिकाउँदै आएका छन् ।
त्यसै बीचमा उनले सन् २००५–२००६ मा कलानीधिमार्फत इलाहवादको २ वर्षे जुनियर डिप्लोमा गायनमा पुरा गरेका छन् ।
संगीत प्रशिक्षकको रुपमा उनी रातो बंगला, प्रिमियर इन्टरनेशनल हुँदै २०१० देखि चेल्सी इन्टरनेशनल (विद्या संस्कार स्कूलमा) कार्यरत छन् ।
संगीत प्रशिक्षकको रुपमा सक्रिय रहेकै बेला उनी पाश्चात्य रक–ब्लूज आर्टिष्टका गीतहरु सुन्दै, बजाउँदै गर्दथे । एरिक क्ल्यापटन, जिमी हेण्डरिक्स आदि कलाकार संगीत सुन्दै लगभग १२ वर्ष सम्म (सन् २००३ देखि २०१५ सम्म) उनले आफूले बजाउने गीतमा अर्बन ब्लूज (इलेक्ट्रिफाइड) फिल दिने कोशिस गरे ।
अनि आयो टर्निङ प्वाइन्ट
नेपालमा सन् २०१५ मा भूकम्प आएपछि संगीत क्षेत्रको अवस्था निकै कमजोर बनेसंगै उनी पनि फ्रस्टेड हुन थाले ।
उनले सन् २०१० देखि नै ब्लूज संगीतको बारेमा रिसर्च त गर्न थालेको थिए, तर सन् २०१७ मा एक पटक उनी नराम्ररी बिरामी परे ।
‘म त्यो बेला धेरै नै बिरामी परें, लामा समय बेड रेस्ट नै गर्नु पर्यो, संगीतकर्मी प्रकाशले आफू कसरी कन्ट्रि ब्लूजको सर्जक बन्न पुगे भन्ने कुराको चुरो सुनाउँदै भने— ‘त्यहि बेला मोबाइल चलाउँदै गर्दा
फेसबुकमा ‘अकुष्टिक ब्लूज पिकर्स पेज’ देखें र एउट गीत ‘मि एण्ड द डेभिल ब्लूज’ (रोबर्ट जोन्सनको) सुनें । त्यसलाई एक हप्ता लगाएर प्राक्टिस गरी अपलोड गरें । त्यो गीत सुनेर एक जना अमेरिकी नागरिक फ्रेड लभले मलाई रेसोनेटर गिटार र केही स्लाइड पठाइदिन्छु भनी केही महिनामै पठाइदिनु भयो । हो, त्यही बेलादेखि मेरो कन्ट्रि ब्लूजको संगीत यात्रा प्रारम्भ भयो ।’
यसरी छाए अन्तर्राष्ट्रिय ब्लूज संगीतमा
प्रकाशले सन् २०१७ देखि नै अमेरिकाको माउण्ट जायन मेमोरियल फण्डमार्फत त्यहाका एकजुकेटीभ डाईरेक्टर डा. टि डी मूरको सहयोगमा औपचारिक रुपमा ब्लूज संगीतको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न थाले ।
सन् २०१७ देखि २०१९ सम्ममा उनले ‘सिरियस ब्लूज’ रिसर्च पुरा गरी ब्लूज मेन्टरशीप ट्रेनिङ गरे, त्यो पनि अमेरिकन म्युजिकल पायोनियर मिस्टर टि जे ह्विलरसंग ।
सन् २०१९ मा आधिकारिक ब्लूज संगीत र यस संगीतको सिरीयस अनुसन्धान गर्न सम्बन्धन प्राप्त गरे माउन्ट जायन मेमोरियल फण्ड मिसिसिपि, अमेरिकाबाट ।
उनी अन्तर्राष्ट्रिय गायक तथा रचनाकार संघ, जर्जीया, अमेरिकाको सदस्य पनि हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार एवं ब्लूज संगीतको ज्ञाता भनेर २०१९ माउन्ट जियोन मेमोरियल फण्डबाट सम्बन्ध र आधिकारिक रुपमा प्रमाणपत्र नै पाइसकेका छन् ।
उनको परफरमेन्स हेरेर विश्वका ब्लूज लिजेण्ड रोरी ब्लकले उनलाई इन्टरनेशनल फील र वन्डरफूल प्लेईङ भनेर वधाइ तथा शुभकामना दिईन् ।
यसै क्रममा प्रकाशले ग्रामी अवार्डका नोमिनी इटालियन हार्मोनिका प्लेयर फाब्रिजीयो पोज्जीसंग मि एण्ड द डेभिल ब्लूज गीतमा कोल्याब्रेसन नै गरिसकेका छन् ।
उनले लेखेको कोट ‘बि बि किङ ग्लोवलाईज्ड दि बूल्ज’ पनि त्यहाँका अथरहरूले प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।
उनी सेन्ट्रल आईवोआ ब्लूज सोसाईटी, अमेरिकाको ‘ह्वेर ईन दि वर्ल्ड : ब्लूज एम्बेसेडर ट्राभल सिरीज’ मा फेव्रुवरि महिनाभरी ब्लूज एडुकेटरको रूपमा फिचर भएका थिए ।
त्यस्तै विक्सबग ब्लूज सोसाईटी, मीसीसीपी, अमेरिकाको ब्लूज च्यालेन्ज फाईनलमा फिचरिङ भएका थिए ।
प्रकाशले कन्ट्रि ब्लूजको क्षेत्रमा पाएको सफलताका कथाहरु अमेरिका, क्यानाडा, ब्राजिल, चिली, अष्ट्रेलिया, यूकेन आदि देशका पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित मात्रै भएका छैनन्, ती देशका रेडियोहरुमा उनका कन्ट्रि ब्लूज कभर तथा ओरिजिनल गीत–संगीतहरु प्रसारण भैरहेका छन् ।
उनका गीतहरु सन् २०१९ को जुलाई तथा यही वर्षका जुलाई महिनाभरी यूक्रेनको ब्लाइण्ड डग रेडियोमा प्रसारण भएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाश
कन्ट्रि ब्लूज संगीतको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उनलाई प्रकाश स्लिमको नामले चिनिन्छ ।
प्रकाश स्लिमको रुपमा विदेशका थुप्रै ब्लूज संगीतका प्रमूख र प्रतिष्ठीत प्रकाशन, वेबसाईटहरू तथा अन्य संचारमाध्यमहरूमा जीवनी कथा तथा अन्तर्वार्ताहरु प्रकाशित भैसकेका छन् ।
अमेरिकाको पहिलो एवं लिडिङ ब्लुज पत्रिका लिभिङ ब्लूजमा उल्लेख हुनुका साथै प्रतिष्ठित ब्लूज रेडियो इन्टरनेशनल फ्लोरिडा, अमेरिकामा ब्लूज संगीतज्ञाताको रुपमा उनको अन्तर्वार्ता प्रसारण गरिएको थियो ।
यसका साथै अमेरिकन ब्लूज सिन पत्रिका, फ्लोरिडामा पनि उनको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको थियो ।
ब्लूज लेटर म्यागजिन अमेरिका, ब्लूज डट जि आर ग्रिस र ब्लूज एण्ड को पत्रिका फ्रान्समा पनि अन्तर्वार्ता प्रकासित भयो ।
अमेरिका, फ्रान्स, आयरल्याण्ड, ग्रिस, पाराग्वे, पेरू र अन्य केहि देशमा उनको जीवनी तथा अन्तर्वार्ताहरु प्रकाशित भएका छन् ।
पाराग्वेको प्रमुख राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले त प्रकाशलाई ‘नेपाली रोबर्ट जोन्सन’ भनि अन्तवाॅता प्रकाशित गरेको छ ।
रोबर्ट जोन्सन डेल्टा ब्लूज संगीतको महारथी मानिन्छन् ।
उनको ग्रेटफूल वेब मिडिया, कोलोराडो, अमेरिकामा अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको छ भने पेरुमा पनि उनको जीवनी प्रकाशित भएको छ ।
प्रकाशको पहिलो ओरिजिनल अंग्रेजी ब्लूज गीत ‘भिलेजर्स ब्लूज’ अष्ट्रेलियाको एउटा एफएमबाट रिजिल भएको थियो, सन् २०१९ को जुलाई ४ का दिन ।
अन्तर्राष्ट्रिय ब्लूज फेस्टिभलमा प्रकाश
यसबाहेक प्रकाशले हालसम्म फ्रान्सको प्रतिष्ठित क्रसरोड्स कन्फाईन्ड काउन्टडाउन फेस्टिभलमा यूट्युब लाइभमा बजाउने सौभाग्य पाएका छन् ।
पाराग्वेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्लूज संगीत फेस्टिभलमा अनलाइन बजाउने मौका पाएका छन् ।
पेरुको अन्तर्राष्ट्रिय ब्लुज संगीत फेस्टिभल अफ लिमा, पेरुमा पनि अनलाईन शोमा बजाएका छन् ।
अमेरिकामा आयोजित वर्ल्ड यूनिटी ओपन म्युजिक भर्चुअल इभेन्ट द फायरमा पनि उनले भर्चुअल्ली सहभागिता जनाएका छन् ।
प्रकाशले सन् २०१५ मै अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा सम्पन्न क्रिएटिभ म्युजिसियन्स रिट्रिट प्रोग्राममा सहभागिताका लागि निम्तो पाएका थिए, तर विविध कारणले उनी उक्त कार्यक्रममा सहभागि हुन सकेनन् ।
प्रकाशलाई केही प्रश्न
तपाईंको नाम ‘प्रकाश स्लिम’ कसरी रहन गयो ?
जब मैले सिरियस ब्लूज रिसर्च पुरा गरें, डाक्टर टि डी मूरले सर्टिफिकेशनका लागि मलाई सोध्नु भयो मलाई प्रकाश स्लिम पापा पोखरेलको नाम दिनु भयो । तर जब म अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा चिनिँदै गएँ, त्यहाँका मिडियाकर्मीहरुले, संगीत क्षेत्रका साथीहरुले छोटो नाम राख्न सुझाव दिनु भयो । त्यहि बेलादेखि
मैले मेरो नाम परिवर्तन गरेर प्रकाश स्लिम राखेँ । प्रकाशले नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्छ भने स्लिमले ब्लूज संगीतको जन्मभूमिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने मैले बुझेको छु ।
अन्तर्राष्ट्रिय ब्लूज सांगीतिक जगतमा तपाईंलाई कसरी चिनिन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय ब्लूज जगतमा मेरो पहिचान भनेको एउटा कन्ट्रि ब्लूज आर्टिष्ट र ब्लूज संगीतको ज्ञाताको रुपमा भएको छ । मेरो विधा भनेको कन्ट्रि ब्लूज, जुन ब्लूज संगीतको सुरुवाती स्वरुप हो । नेपालमा भन्नु पर्दा घर भित्रै कसैले शौखको रुपमा बजाउँछ भने त मलाई थाहा छैन, तर व्यवसायिक रुपमा कन्ट्रि ब्लूज आर्टिष्ट भनेर अगाडि आउने चाहिँ मैं पहिलो कलाकार हो जस्तो लाग्छ । र, यही कन्ट्रि ब्लूजको रुपमा विश्वको ब्लूज संगीत समाजको ध्यान केन्द्रित गर्न सफल भएको छु । र केही अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धिहरु पनि पाउनुलाई म थोर–बहुत सफल भएको नै मान्दछु ।
अहिलेसम्म कति वटा ब्लूज गीत–संगीत तयार पारिसक्नु भयो ?
अहिलेसम्म मैले पाँच वटा कन्ट्रि ब्लूज गीत कम्पोज गरेको छु । त्यसलाई टिपिकल कन्ट्रि ब्लूज भन्न सकिन्छ । गएको वर्ष मैले ‘लाकुरी भन्ज्याङ ब्लूज’ नेपाली भर्सन र ‘भिलेजर्स ब्लूज’ अंग्रेजी भर्सनमा थियो । भिलजर्स ब्लूज चाहिँ मैले अष्ट्रेलिया, क्यानडा, ब्राजिल र अमेरिकाका केही रेडियोहरुमा
रिलिज गरेको थिएँ । लाकुरी भन्ज्याङ चाहिं नेपालका एफएमबाट रिलिज भए । यसबाहेक मोवाईल भर्सनहरु मैले यूट्युबमा अपलोड गर्ने गरेको छु भने विदेशका रेडियोहरुले चाहिं गीतको ट्रयाक नै माग्ने भएकाले ट्रयाक बनाउँदै उता पठाउने गरेको छु । लकडाउनपछि यी गीतहरुलाई रेकर्ड गरेर एल्बमकै रुपमा ल्याउने तयारी पनि गर्दैछु ।
नेपालमा चाहिं ब्लुज संगित कत्तिको सुनिन्छ ?
नेपालमा ब्लुज संगितको समग्रमा तीन दशक लामो इतिहास छ । कति लिजेन्ड्रि ब्याण्डहरु अहिलेसम्म सक्रिय हुनुहुन्छ । तर अझै पनि धेरै मानिसहरुमा ब्लूज संगीत भनेपछि इरिक्ल्याप्टन, बिबि किङबाट सुरु भएको भन्ने एउटा धारणा छ । धेरै कमलाई मात्र थाहा छ कि कन्ट्रि ब्लूज नै ब्लूज संगीतको सुरुवाती स्वरुप हो र आधुनिक संगीतको जरा नै कन्ट्रि ब्लूज हो । नेपालमा प्रयोग पनि गर्दैछु ।
ब्लूज संगीतको विशेषता के हो ?
ब्लूज संगीत सन् १८७० मा अमेरिकाको डिप साउथबाट सुरुवात भयो भन्ने मानिन्छ । तर विशेषतः अफ्रिकन रिदम, मेलोडी, हार्मोनिक टेन्सन, डान्स, कल्चर नै यसको जरा हो । यसमा आध्यात्मिक चिन्तन, खेति–किसानी, भट्टयाऊने, साधारण कथा आदि समावेश हुन्थ्यो । यसका विशेष कर्ड्स
प्रोगेसन, कल एण्ड रेस्पोन्स, ब्लूज स्केल, लिरिक्स, इन्स्ट्रुमेन्टेसन नै यसका विशेषता हुन् ।
अबको योजना भनेको म अब अन्तर्राष्ट्रिय ब्लूज फेस्टिभलहरुमा नै गएर बजाउने योजना छ । ती फेस्टिभलका लागि आफूलाई तयार पारिरहेको छु । यसका साथै एल्बमको तयारीमा पनि छु । नेपालमा कन्ट्रि ब्लूजलाई स्थापित गर्ने र नेपाली गीत–संगीतलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनलागि मेरो यो
कन्ट्रि ब्लूजको यात्राले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान बनाएपछि सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
भविष्यमा नेपालमा समेत ब्लूज संगीतलाई लोकप्रिय बनाउन के कस्तो योजना
बनाउनु भएको छ ?
ब्लूज संगीत एउटा संगीतमात्र नभएर एउटा संस्कृति पनि हो । त्यसैले यसलाई स्कूल स्तरबाटै नै पढाउनु पर्छ भनेर ब्लूज इन द स्कूल्स भनेर स्कुलमा पनि पढाउँदै आएको छु । मेरा कक्षा ३–४ का विद्यार्थीहरुले समेत ब्लूज संगीतको इतिहास पढिरहेका छन् । बाजा बजाउने, गाउने गर्दैछन् । ब्लूज संगीतको इतिहास नजानि यसमा डुब्न सकिंदैन मैले गत वर्ष काठमाडौंमा ब्लूज संगीतका बारेमा एउटा वर्कशप पनि चलाएको थिएँ । ब्लूज संगीत के हो, यो संगीत कहाँबाट आयो, सही अर्थमा ब्लूज संगीत के हो भन्ने कुरा नबुझेसम्म यो संगीतका बारेमा बुझ्न कठिन छ । म अहिले यही कुरा कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा लागिरहेको छु । यसबाहेक मैले ब्लूज इन स्कूल भनेर यूट्युबमा पनि विभिन्न क्लिप्सहरु राखिरहेको हुन्छु । बिस्तारै फेस्टिभल नै आयोजना गर्ने योजना छ । वर्कशपहरु गर्ने, लाइभ शोहरु गर्ने योजना छ ।
अन्त्यमा, तपाईंले आफ्नो नेपाली कन्ट्रि ब्लूज ‘लाकुरी भन्ज्याङ’ मार्फत के सन्देश दिन खोज्नु भएको छ ?
मैले आफ्ना पहिलो नेपाली कन्ट्रि ब्लूजमा लाकुरी भन्ज्याङको पीडालाई चित्रण गरेको छु । मान्छेले भोगेका दुःखहरुलाई नै चित्रण गरेको छु । उठ न उठ माइला दाइ, जानु छ लुभु शहर भन्दै गीतलाई अघि बढाएको छु । नेपालमा जातिय विभेद, बेरोजगारी, कुरिती, अशिक्षा, स्वस्थ्यको अभाव जस्ता विषयमा ब्लूज गीतहरु तयार पार्ने योजना पनि छ ।
समाचार शाभार :https://www.kalakarmi.com/special/24536/